Nsonaazụ nke mkpebi ahụ na Brussels: EU ghọrọ ihe na-enweghị atụ
Mgbe ahụ anyị dọrọ anyị aka na ntị banyere ọbịbịa nkwenkwe ụgha. Ugbu a isi okwu na Aftonbladet bụ nkwenye nke ahụ, afọ 18 ka e mesịrị - mana ọ kaala ọd&
Ọ bụrụ na i lee site n’echiche nke mmadụ, ị ga - etinye aka ma topụta ihe na - eme, mana ndị kwenyere n’amụma okwu nke Akwụkwọ Nsọ na - ahụ ihe ọzọ. Ọ dị oke mkpa ikwere n’amụma okwu Chineke, ịghara ileghara ya anya ma bido ibido ikwu gbasara ịkọ nkọ na ịkọwa okwu amụma ahụ. Enwere ike ịme nke a ruo ụbọchị ikpechi ahụ ga-emeghe anya ya.
Akwa ike na-achịkwa na mpaghara nke Alaeze Ukwu Rom oge ochie
Nke a bụ nsonaazụ mkpebi ae mere na Brussels. Ọ bụ nzọcha akụkọ ihe mere eme na ọbụghị amụma nke ga - emezu ma ihe amụma ahụ buru n'amụma ga - abịa. (Nseta site na Aftonbladet na Världen Idag.)
Ọ bụ ezie na ndị Europe nọ ezumike n'ọtụtụ mba, enwere mkpebi mkpebi karịa isi ha nke ọtụtụ ndị na-aghọtaghị. Ọbụna Ndị Kraịst na-achọghị ịma banyere okwu amụma amaghị ihe ọ bụla.
Ihe ekwusara kemgbe e dere okwu mbụ banyere Akwụkwọ nke Mkpughe ekpughere ịba mba ukwu ike na ókèala nke Alaeze Ukwu Rom oge ochie, anyị nwere ya ugbu a - EU. Ọ ga - eme na oke oge anyị nọ ugbu a.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ na-ekwu maka EU dịka ọrụ udo, nke a na-eme. Site n’okwu nke imekọ ihe ọnụ maka udo n’etiti mba ndị dị na Yurop, ị nwere ike ịme ka ọha mmadụ nọkọta ọnụ - mmadụ niile chọrọ udo. Mana mmadụ enweghị echiche ihe njedebe nke nnukwu ike a na-eweta ga-apụta.
Ọ bụrụ na i lee site n’echiche nke mmadụ, ị ga - etinye aka ma topụta ihe na - eme, mana ndị kwenyere n’amụma okwu nke Akwụkwọ Nsọ na - ahụ ihe ọzọ.
Ọ dị oke mkpa ikwere n’amụma okwu Chineke, ịghara ileghara ya anya ma bido ibido ikwu gbasara ịkọ nkọ na ịkọwa okwu amụma ahụ.
Enwere ike ịme nke a ruo ụbọchị ikpechi ahụ ga-emeghe anya ya. Ọ bụghị uche anyị mgbe ahụ ịghọta ihe merenụ - anyị kwesịrị inwe anya amụma ma hụ ihe na-eme ugbu a.
Nnukwu ndi amuma
N’ime oke ụkọ nke ndị amụma n’ala anyị, “okwute nwere ike ikwu okwu.” Ugbu a Göran Greider mere ya na Aftonbladet na 22 Julaị. Ọ na-ede otu edemede na isi okwu: "Ugbu a, a na-ewuli nkwenkwe ụgha". Ọ na-ekwu maka ókè nke a: “Ya mere, ọ bụghị m nke na-ama jijiji. Nke ahụ bụ ala. ”
Ọ gara n'ihu na-ede, sị: "Ọtụtụ ndị gosipụtara ọmụmụ nke steeti EU ọhụrụ a nwere obi ụtọ na, dịka ọmụmaatụ, ịhụ mba n'anya Sweden" meriri "- mana ahụghị na ha onwe ha na-akpa oke dị ka ndị hụrụ mba n'anya zuru oke, bụ ndị na-eme ememe ụbọchị ọmụmụ nke nnukwu mba, European's United States. "
Edere ọtụtụ edemede
Na Flammor, anyị edeela ọtụtụ akụkọ banyere mmepe na Europe n'ime afọ ndị gara aga, ihe dị ka 50 n'ime ndị a dị na ibe anyị ma ọ bụrụ na ị pịa igodo EU. N’okpuru bụ otu n’ime isiokwu anyị dere na 2002.
Mgbe ahụ anyị dọrọ anyị aka na ntị banyere ọbịbịa nkwenkwe ụgha. Ugbu a isi okwu na Aftonbladet bụ nkwenye nke ahụ, afọ 18 ka e mesịrị - mana ọ kaala ọdụ karịa mgbe ọ bụla.